Uthando LukaNkulunkulu Kuphela Olungolweqiniso | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
UNkulunkulu wathi, “Izwe laseChina eligcoliswe iminyaka eyizinkulungwane liqhubekile kwaze kwaba yinamuhla. Zonke izinhlobo zamagciwane ziqhubeka nokwanda yonke indawo njengombulalazwe; ukubheka ubudlelwano babantu nje kukodwa kwanele ukuthi ubone ukuthi abantu banamagciwane angakanani. Kunzima ngokwedlulele ukuthi uNkulunkulu Aqale umsebenzi waKhe endaweni ecinene kangaka nechaphazelwe yigciwane. Izimilo zabantu, imikhuba, indlela abenza ngayo izinto, konke abakuveza ezimpilweni zabo kanye nobudlelwano babo nabantu konakele ngendlela engakholakali …” (“Indlela… (6)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Isambulo emazwini kaNkulunkulu sangenza ngabona ukuthi inkohlakalo kaSathane yenza kanjani bonke ubudlelwane phakathi kwabantu bube ngobungajwayelekile, ngenxa yokuthi bonke busekelwe emfundisweni kaSathane yempilo, ngaphandle kokuba ngisho neqiniso elincane. Ngaphandle kwensindiso kaNkulunkulu, amehlo ami ngabe asemboziwe futhi ngabe ngisabanjwe yimizwa yami, kodwa ukuhlangabezana nomsebenzi kaNkulunkulu kwangenza ngaqonda umongo wokuthi kuchazani “ukusizana omunye nomunye” futhi kwangikhombisa iqiniso lobungani, uthando, kanye nothando lomndeni. Ngabona ukuthi amazwi kaNkulunkulu kuphela ayiqiniso, kanye nokuthi kungokuphila ngamazwi kaNkulunkulu kuphela ukuba sikwazi ukuphunyuka ethonyeni likaSathane, kanye nokuthi kungokuziphatha kahle ngokuhambisana neqiniso kuphela ukuba umuntu akwazi ukuphila impilo enomqondo.
Ngenkathi izihlobo zami zithola ukuthi ngangikholwa kuNkulunkulu, aziphezanga ukungiphazamisa. Zazicabanga ukuthi yayingekho nje into eyayingihlanganisa nokukholwa kuNkulunkulu ngisemncane kangaka. Ubabekazi wami wasohlangothini lukamama wayelokhu engicela ngimenzele izinto ezithile, ubabekazi wasohlangothini lukababa yena wangicela ukuba ngibe uphathina wakhe ebhizinisini, ngisho umama owayenginakekela wazama ukungigqugquzela ukuba ngishade, ethi wayeyoyinakekela ingane yami emva kokuba izelwe (ngoba wayengenayo yena indodana ayizalayo), ugogo wami yena wayekhala, ethi, “Angikuphikisi neze ukukholwa kwabazali bakho kuNkulunkulu, ngoba vele base besebenze ingxenye yempilo yabo yonke futhi banikezela ngakho konke ababenakho ukuze bacabele nina indlela, ngakho sekuyisikhathi sokuba baphumule. Kufanele ugxile ekuqaleni umndeni nomsebenzi.” Wabe eseqhubeka nokuchaza ukuthi ubaba wami wayekhule kanjani ngaphansi kobubha, ukuthi waqala kanjani ukuzakhela impilo engathathi ndawo, ukuthi wahlupheka kanjani, wasebenza kanzima kanjani, waphinde wangitshela nokuthi ngangiphila ngaphansi kwesimo esihle kanjani, nokuthi ngangingenazimpokophelo. Lokhu “kuzikhathaza” kwabo ngami okuyisigubhukane kwakungijabulisa. Ngangididekile, ngoba kwakubukeka sengathi konke okwakushiwo ngumuntu ngamunye kubona kwakuyiqiniso, bonke babengifisela okuhle, futhi njengoba babeziyihlobo ezisondelene nami, nakanjani babengeke bangilimaze. Ngangiphila ngaphansi kokucwengwa, futhi yize noma ngangazi ukuthi le kwakuyimpi yomoya, ngangingasenawo amandla okulwa. Emhlanganweni, umholi wangikhombisa le ndima evela ezwini likaNkulunkulu, “Izinkulungwane zeminyaka, amaShayina ebephila impilo yezigqila, lokhu sekuyikhinyabezile imicabango yawo, imibono, ukuphila, ulimi, ukuziphatha, kanye nezenzo kwaze kwabashiya bengenayo nencane inkululeko. Umlando oyizinkulungwane eziningi zeminyaka uthathe abantu abanempilo abagcwele umoya wabatuba baba yinto efuze izidumbu ezingenawo umoya. Abaningi yilabo abaphila ngaphansi kommese wasesilaheni kaSathane…. Ngaphandle, abantu babonakala “beyizilwane” eziphakeme; eqinisweni, baphila futhi bahlale namadimoni angcolile. Kungekho muntu wokubanakekela, abantu baphila ogibeni olucashile lukaSathane, bebambeke konoxhaka bakhe, kungekho ndlela yokuphunyuka. Kunokukhuluma ukuthi bahlangana nezihlobo zabo emakhaya athokomele, baphile ukuphila okumnandi nokugculisayo, umuntu kufanele athi abantu baphila eHayidesi, bebhekana namadimoni futhi bephila nodeveli” (“Umsebenzi Nokungena (5)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngokwambulelwa ezwini likaNkulunkulu nokuhlanganyela nabafowethu nodadewethu, ngabona ukuthi yize noma bebonakala njengezihlobo zami ngaphandle, futhi amazwi abo ehambelana nezidingo zami zenyama, imicabango yami, imibono, impilo, ulimi, indlela yokuziphatha, kanye nezenzo kuboshiwe ngenxa yenkohlakalo kaSathane. Bonke kabakholwa, yonke imibono yabo nakho konke abakudingidayo kuvela kuSathane, futhi konke abakulandelelayo kuyizimfuno ezimbi zenyama, akukho kukhona okuhambisana neqiniso. Uma ngibalalela, ngingawela emacebeni kaSathane. Anginalo iqiniso kanye nokuhlola imimoya, futhi ukuqhubeka nokuhlala nabo kuyongenza ngehle ngifinyelele ezingeni labo. Ngangingeke ngizuze lutho kulokho, babengase bangicekele phansi. Ngaleso sikhathi, nganginakho ukuwaqonda okuthile amazwi kaNkulunkulu, “Bonke labo abangakholwa, kanye nalabo abangalenzi iqiniso, bangamadimoni,” kodwa ngangingakabi nakho ukukuqonda okuphelele. Kamuva, uNkulunkulu wangihlelela izimo ezangikhombisa umongo woqobo wokuxhumana komndeni.
Umndeni wethu selokhu wawungumndeni osingatha izihambi, kwathi ngelinye ilanga ngonyaka ka-2005, ngenxa yombiko womenzi okubi, abazali bami nabanye babafowethu nodade baboshwa amaphoyisa eCCP. Udadewethu engizalwa naye ngenhlanhla wacishe waminza kodwa wasinda ngoba wabaleka, wasinda nje ngoba uNkulunkulu wamvikela. Abazali bami nabafowethu nodadewethu ekhaya lomndeni wami bagcinwa khona bahlawuliswa, futhi bonke bahlushwa, bonke basala nezingozi belimele. Ngithe uma ngizwa izindaba, ngahluleka ukubamba imizwa yami. Angikwazanga ukugcwalisa izibopho zomsebenzi wami. Ngacabanga ngathi, “Esikhathini esifana nalesi nakanjani kufanele ngigoduke. Abazali bami bangikhulisile, manje basenkingeni, ngisho noma kungekho engizokwenza kodwa okungenani ukuba ngiyobahlola nje ngibaduduze.” Ngakho-ke ngagibela isitimela esibheke ekhaya ngaqonda ngqo ekhaya likababekazi wami wasohlangothini lukababa (naye okholwa kuNkulunkulu) ukuze ngiyobona abazali bami. Ngaleso sikhathi ngabona ukuthi amanxeba ayengakapholi, ngezwa ngidabuka ngaphakathi, izinyembezi zaphihlika emehlweni ami. Ngabona sengathi abazali bami babehlazisiwe. Yilapho-ke abazali bami bathi kimina: Ngenkathi yokubalekela amaphoyisa, udadewethu engizalwa naye waziphonsa emfuleni (lokhu kwenzeka ngoZibandlela, kusihlwa). Amanzi ayefinyelela amqaleni wakhe, umsinga wawunamandla kakhulu, izitshalo zasendle zabambeka emlenzeni webhulukwe lakhe, izicathulo zakhe zabambeka odakeni, futhi wayengakwazi nokubhukuda, ngakho kuseyimfihlakalo nje ukuthi wafinyelela kanjani kolunye uhlangothi. Kusho ukuthi uNkulunkulu wamvikela ngendlela eyisimangaliso, kungenjalo imiphumela yayizoba yinhlekelele engacabangeki (amanzi ajulile nomsinga onamandla kwakumuke nempilo yomlisa owayeseminyakeni ehamba kwengama-40 ezinsukwini ezingengaki ezidlule). Kamuva, udadewethu eselamana naye wacasha ekhaya likadade owayesekhulile nowamnika izingubo zokushintsha ngenkathi ekhala futhi omisa izingubo zakhe emlilweni, futhi nje wamnakekela kahle. Ezinsukwini ezimbalwa emva kwalokho waphinde wathola ukuthi nekhaya likadade omdala lalingasaphephile, ngakho udadewethu eselamana naye waya kocasha ekhaya likababekazi ozalana nomama. Waphuma emini ehambise incwadi ebhekiswe ebandleni lethu ibikela umholi webandla ngesimo somndeni wami, kodwa uthe uma esebuya, indodakazi encane kababekazi ozalana nomama wathi kuye, “We mzala, ubuyeleni? Bengicabanga ukuthi uhambile. Sesiwusongile nombhede.” Udadewethu wabona ukuthi ubabekazi ozalana nomama wayesaba ukubandakanyeka futhi engafuni ukuba ahlale ekhaya lakhe, ngakho ekhala izinyembezi, wahamba ekhaya labo, wazibeka engcupheni yokuba aboshwe weza ekhaya ngoba wayengenayo enye indawo ayengaya kuyona. Emva kokudedelwa kwabazali bethu, uma bezwa ngokuthi udadewethu wayecishe waminza ukuthi wayexoshwe kanjani ngubabekazi ozalana nomama, bathukuthela kakhulu, kodwa ubabekazi ozalana nomama, ngephimbo elalinesiqiniseko sokuthi akwenzile kwakulungile, waphendula wathi, “Kunjalo, vele siyesaba ukubandakanyeka. Nina nizilethele nina loku kuboshwa. Naninempilo enhle emnandi, kodwa nakuchitha konke lokho, manje nicishe nabulalisa umuntu!” Ngangingakaze ngicabange ukuthi isihlobo esisondelene kanje nathi, abantu ababesondelene nami ngaphambilini, esikhathini lapho iCCP ibopha umndeni wami nezimpilo zabo zisengcupheni, ngesikhathi lapho induduzo yayidingeka ngempela, wayengakhipha amazwi anobulwane kanje noma enze izinto ezinonya kangaka. Ukwazi ukuthi wayengangidangalisa kangaka. Akekho noyedwa kubantu esabasiza kakhulu ngaphambilini oweza wazosibheka noma asiduduze. Labo esasinobudlelwane obuhle nabo abagcinanga nje ngokungabakhulumisi abazali bami uma behlangana nabo emgaqweni, kodwa babebabalekela. Abanye ababejwayele ukunqekuzisa amakhanda basibingelele uma behlangana nathi manje babesifulathela basihlebe. Ngabafowethu nodade kuphela abafika bazosivakashela futhi bahlanganyela nathi kusihlwa. Ngangingakaze ngicabange ukuthi umndeni wethu wawuyoke ubhekane nokuhlukumezeka okungaka, ngaphinda ngavinjezelwa ubuhlungu, nginanemicabango yokumkhaphela uNkulunkulu ngaphakathi enhliziyweni yami. Kamuva, emva kokuthola isambulelo esivela kuNkulunkulu, ngabhekana nalokho abafowethu nodade esikhonza nabo ababeke bakhuluma ngakho, “Ubudlelwane phakathi kwabantu abusekelwe ndawo ngaphandle kwezintshisekelo ezifanayo, umndeni nabangani bamane basizane nje esisekelweni esizuzisa izingxenye zombili.” Ngaphinde ngacabanga emuva engxoxweni yami nabazali bami emayelana nalokho abakuzuza kulesi sehlakalo sokuboshwa kwabo, isibonelo: Ngenkathi amaphoyisa esebenzisa isitswebhu sesikhumba eshaya ubaba, uthi akezwanga ubuhlungu obutheni, nokuthi ibhande lagqashuka laba yizingcucu ezintathu ngenkathi bemshaya. Udadewethu uthi akezwanga kwesaba nhlobo ngenkathi ebhekene nesakhe isehlakalo, futhi yize noma kwakunguZibandlela, uthi akezwanga makhaza avela emanzini. UNkulunkulu wamnikeza amandla athe xaxa nokuzethemba. Ukuboshwa yiCCP empeleni kwakubenze bazimisela nakakhulu. Kwakubenze banamandla kakhulu. Ubaba wathi wayengakaze akholwe emazwini kaNkulunkulu ngaphambilini mayelana nendlela uNkulunkulu aveza ngayo ububi, ukuzonda iqiniso kweCCP enkathini edlule, nokuthi wayekade eyihlonipha inkosi yodeveli, kodwa lesi sehlakalo samkhombisa ukuthi iCCP kwakuyiqeqebana nje lezinswelaboya, izigcwelegcwele ezazithathela noma yini ekhaya lethu ebizayo futhi ezazibopha izakhamuzi ezithobela umthetho ezikholwa kuNkulunkulu kunokubopha ababulali nabokheli bomlilo empahleni. Ngaba namahloni uma ngiqonda ukuthi sonke siphila ngaphansi kobuholi bukaNkulunkulu, yonke into esibhekana nayo iyingxenye yobukhulu bukaNkulunkulu nezinhlelo, akekho umuntu onamandla okusiza abanye, ukuthandana kwemindeni kuyosixoshela le kude noNkulunkulu, nokuthi izinto abantu abakwazi ukusizana ngazo zihambelana nenyama, hhayi iqiniso. Imicabango efana nokuthi “ukungafuni inyama yabazali bami ihlupheke” ayigcini nje ngokungalethi mhlomulo empilweni yabo, futhi ayibaletheli mhlomulo ensindisweni yabo. UNkulunkulu kuphela owazi okudingwa ngumuntu, futhi nguNkulunkulu othanda umuntu ukudlula bonke abantu. Ngabona indinyana yezwi likaNkulunkulu eyayithi, “Kusukeka ngesikhathi edala umhlaba, uNkulunkulu wenze umsebenzi omningi obandakanya ukubaluleka kokuphila, wenze umsebenzi omningi onika umuntu ukuphila, futhi wakhokha inani elikhulu ukuze umuntu aphinde abe nokuphila, ngoba uNkulunkulu Uqobo uwukuphila okungunaphakade, futhi uNkulunkulu Uqobo uyindlela umuntu avuswa ngayo. UNkulunkulu uhlala ekhona enhliziyweni yomuntu, futhi uphila phakathi komuntu ngaso sonke isikhathi. Nguye obeqhubekisa ukuphila komuntu, isisekelo sobukhona bomuntu, futhi utshale lukhulu ukuze umuntu aphile emuva kokuzalwa. Wenza umuntu azalwe kabusha, futhi wenza akwazi ukuphila endimeni nendima okumele abe kuyo. Sibonga amandla Akhe, kanye namandla Akhe okuphila angeshatshalaliswe, umuntu uphile izizukulwane eziningi, kukho konke amandla kaNkulunkulu yiwo akade enza ukuthi umuntu aqhubeke nokuba khona, futhi uNkulunkulu ukhokhe inani umuntu ojwayelekile angakaze alikhokhe. Amandla empilo kaNkulunkulu angachuma kunanoma amaphi amandla, phezu kwalokho, edlula wonke amandla. Ukuphila Kwakhe kungunaphakade, amandla Akhe makhulu ngokwedlulele, futhi amandla Akhe okuphila awehlulwa yinoma yini edaliwe noma amandla esitha. Amandla kaNkulunkulu akhona, futhi akhanyisa bha, noma ngabe yisiphi isikhathi noma indawo. Izulu nomhlaba kungaba nezinguquko ezinkulu, kodwa ukuphila kukaNkulunkulu kuhlala kufana. Zonke izinto ziyedlula, kodwa ukuphila kukaNkulunkulu kulokhu kumile, ngoba uNkulunkulu ungumthombo wobukhona bazo zonke izinto, futhi ungumsuka wobukhona bazo. Ukuphila komuntu kuvela kuNkulunkulu, izulu likhona ngenxa kaNkulunkulu, futhi ubukhona bomhlaba busuka emandleni okuphila kukaNkulunkulu. Akukho okubalulekile okungadlula ubukhulu bukaNkulunkulu, futhi akukho okunamandla okuphuma emandleni okuphathwa nguNkulunkulu. Ngale ndlela, ngisho noma bangobani, bonke abantu kumele bathobele ukubusa kukaNkulunkulu, bonke abantu kumele baphile ngaphansi kokulawulwa uNkulunkulu, futhi akekho umuntu ongaphunyuka elulawuleni Kwakhe” (“UKristu Wezinsuku Zokugcina Kuphela Onganika Umuntu Indlela Yokuphila Ingunaphakade” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngenxa yamazwi kaNkulunkulu nempilo yangokoqobo, ngabona ubukhulu nokumangalisa kwamandla empilo kaNkulunkulu, ukuthi uphila phakathi kwabantu ngaso sonke isikhathi, kwesinye isikhathi uhola umuntu aphinde akhombise amandla Akhe, kanye nokuthi wonke umuntu uphila ngezihlelo ezihlelwe nguNkulunkulu. Ngibhekene nezwi likaNkulunkulu, ngabona ukuthi ngangimncinyane kangakanani nokuthi ukuxhumana ngemimoya kwakungabalulekile kangakanani. Yini engangingayenza ngibhekene nobunzima bomndeni wami? Angithi uNkulunkulu kwakunguye futhi obavikelayo, obanakekelayo, nobaholayo ezimweni zabo eziyingcuphe? Kungenzeka uthando lomuntu ngomunye umuntu lube lukhulu kunothando lukaNkulunkulu lomuntu? Ngesikhathi esifanayo, amazwi kaNkulunkulu angahlulela, “Ngubani phakathi kwenu ongazikhandla ngokugcwele ngenxa Yami futhi anikele konke okwakhe ngenxa Yami? Nonke aninamdlandla, imicabango yenu iyazungeza izungeze, icabanga ngekhaya, izwe elingaphandle, ukudla nokokugqoka. Ngaphezu kweqiniso lokuthi uphambi Kwami ungenzela izinto, enhliziyweni Yakho usacabanga ngomkakho, abantabakho nabazali bakho ekhaya. Ngabe bonke bayinto Yakho? Kungani ungababeki ezandleni Zami? Awukholwa ngokwanele Kimi? Noma ngukuthi wesaba ukuthi ngiyokwenzela amalungiselelo angafanele? Kungani uhlala ukhumbula ikhaya? Futhi ukhumbula abanye abantu! Ngabe nginaso isikhundla esithile enhliziyweni yakho? Futhi usakhuluma ngokungivumela ngibe nokubusa phakathi kuwe futhi ngihlale kubo bonke ubuwena—konke lokhu kungamanga okukhohlisa! Bangaki kinina abangabebandla ngazo zonke izinhliziyo zenu? Futhi ngubani phakathi kwenu ongazicabangi yena, kodwa ongowombuso wanamuhla? Cabanga ngokucophelela kakhulu ngalokhu” (“Isahluko 59” sombhalo othi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngabona ukuthi into engangisayithanda kakhulu enhliziyweni yami kwakuseyiwo umndeni wami, ngoba ngangingenalo ukholo lweqiniso kuNkulunkulu, ngangingakakwazi ukubathatha ngibabeke ezandleni zikaNkulunkulu; ngabona ukuthi ngangingaphili eqinisweni, futhi yize noma ngangiyigcwalisa imisebenzi yami endlini kaNkulunkulu, esikhathini esiningi ngangiselokhu ngikhathazeke ngomndeni wami, futhi ngingadedeli uNkulunkulu agcwalise inhliziyo yami. Ngangingakwazi ukuhlonipha uNkulunkulu ngaphezu kwabo bonke abanye bese ngenza imisebenzi yami ngokuthembeka. Ngangikhohliswe ngalinyazwa uSathane. Ukube kwakungeve kungenxa yalezi zehlakalo “ezingamashwa” ezazingehlela, ngangisoze ngakwazi ukubona izinto ngokucacile. Kunjengoba leli hubo lamazwi kaNkulunkulu lisho, “Uma kuza esimweni sokuphila komuntu, umuntu usahlalelwe ukuthola ukuphila okungokoqobo, akakayiboni incithakalo nezimo ezinosizi zomhlaba; ukuba bekungekhona ngenxa yokufika kwenhlekelele, abantu bebeyolokhu bebambelele eMvelweni, futhi bebeyolokhu bezilibazisa ekunambithekeni ‘kwempilo.’ Ngabe leli akulona iphimbo lensindiso uNkulunkulu alikhuluma kumuntu? Kungani, phakathi kwesintu, kungekho muntu oke wathanda uNkulunkulu ngokweqiniso? Kungani umuntu ethanda uNkulunkulu kuphela phakathi kokusolwa, kodwa akekho othanda uNkulunkulu ngaphansi kokuvikela Kwakhe?” (“Isintu Asiyazi Insindiso KaNkulunkulu” kwethi Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha). Ukube kwakungeve kungenxa yalezi zimo engazembulelwa, ngangingasoze ngaqonda ngokuyikho ubudlelwane phakathi kwabantu, futhi ngabe ngisalawula ubudlelwane bemindeni, uthando, nobungane, ngisabambeke ngokudlulele ekulangazeleleni nasekulandeleni lezi zinto, ngikhohliswe futhi ngihlushekiswe yikona, ngijabule ekungazini kwami; ngale kwalokho, ngangingasoze ngamukela iqiniso, ngingasoze ngathatha indlela elungile empilweni, futhi kwakuyinsindiso kaNkulunkulu eyangivumela ukuba ngingaphinde ngithole ukuzwa ukunambitheka “kwempilo” futhi. Lapho sengiqonda konke lokhu, nganquma ukuba ngikholwe ngenhliziyo yami yonke ukuba ngikholwe kuNkulunkulu futhi ngilandelele iqiniso ukuze ngikhokhe uthando angithande ngalo uNkulunkulu.
Okwedlule：Ukwehlula USathane Empini